ဆက်စပ်ပစ္စည်း - ဆီလီကွန်တံဆိပ်၊ elastic binding၊ ပိုက်ကြိုး၊ ပလတ်စတစ်ဇစ်မှတ်ချက်။ ။ ပုံနှိပ်အားလုံး - ရာသီဥတုအေးသောကြောင့်လူများစွာသည်ဝါဂွမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောရှည်လျားသောအဝတ်အစားများကိုရွေးချယ်ကြသည်။ ၎င်းသည်ရှည်လျားသောပုံသဏ္clothesာန်ရှိသောအဝတ်အစားများကိုဝတ်ဆင်ရန်တကယ်ပင်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသော်လည်းပုံသဏ္toာန်တိုသောအဝတ်အစားများကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်နွေးထွေးရန်မလုံလောက်ပါ။ ထို့ကြောင့်အသင့်တော်ဆုံးမှာချည်မျှင်အင်္ကျီဖြစ်သင့်သည်။ အင်္ကျီ၏ဤဒီဇိုင်းဖက်ရှင်နှင့်လှပသောမသာ, ဒါပေမယ့်လည်းလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အဆင်ပြေသည်။ လူများစွာ၏ရွေးချယ်မှုလည်းဖြစ်သည်။
ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ပါးပျဉ်း drawcord, Herringbone တိပ်, Silcon တံဆိပ်, နိုင်လွန် zipper မှတ်ချက်များ: အားလုံး - ကျော်ပုံနှိပ်ဖြတ် & ချုပ် panel ကိုလဲမှို့အဖုံးမျှင်ယက်ပြားချပ်ချပ်အပ်နှင့်ရက်ကဆက်ပြောသည်ပေါင်းစပ်ချည်ထိုးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ထည် elastic, အလင်းနှင့်ပျော့ပျောင်းသော, ဝတ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေသည်။ ၎င်းသည်အစိုဓာတ်စုပ်ယူနိုင်စွမ်းနှင့်မြန်ဆန်သောကြောင့်ခြောက်သွေ့။ ကပ်စေးကပ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်လူအများနှစ်သက်သောအထည်ဖြစ်သည်။ အပြာရင့်ရောင်နှင့်အနီရောင်ကိုပေါင်းစပ်ထားခြင်းကလူတို့အားအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုကိုပေးသည်။
ဆက်စပ်ပစ္စည်း: Elastic tape, Plastic zipper မှတ်ချက် - ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၊ ရှေ့မျက်နှာပြင်ရှိလေဆာပေါက်များ windbreaker သည်နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်သမိုင်းကြောင်းရှိပြီးသားဖြစ်ရာယခုအချိန်သည်စမ်းသပ်မှုကိုခံရပ်နိုင်ပုံရသည်။ ၎င်း၏စတိုင်များနှင့်ပိတ်ထည်များသည်သူတို့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားမှုရှိသည်။ ၎င်း၏လက်တွေ့ကျမှုသည်ပြိုင်ဘက်ကင်းသည်။ ရုတ်တရက်အအေးနှင့်ရုတ်တရက်ပူပြင်းသည့်ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ရာသီဥတုမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူလေရဟတ်များကိုဝတ်ဆင်နိုင်သည်။
ဖက်ရှင်တီရှပ် / SX-2262
Slub ဝါဂွမ်းသည်ပိတ်ထည်အားလုံးအတွက်အထင်ရှားဆုံးသောယက်လုပ်ခြင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤထည်သည်ပုံမှန်ဆွဲခြင်းနှင့်ချည်များကဲ့သို့ကောက်ပဲသီးနှံနှင့်တူသောဖွဲ့စည်းပုံအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိသည်။ သဘာဝပိတ်ချောထည်၏အနီးအနားများမှသာမန်ရိုးရိုးချုပ်ထားသောဝါဂွမ်းထည်များထက်ပိုမိုလွယ်ကူသောအသက်ရှူနိုင်မှုနှင့်ချွေးစုပ်ယူမှုစွမ်းရည်ရှိသည်။ ဒါဟာနွေရာသီတီရှပ်များအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ Slub ဝါဂွမ်းသည်နူးညံ့ပျော့ပျောင်းခြင်း၊ လေထုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းမြင့်မားခြင်း၊ ဆန့်ခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကဲ့သို့သောသာမန်ဝါဂွမ်းအထည်များတွင်မရရှိနိုင်သည့်စရိုက်များရှိသည်။
ပိုလိုတီရှပ်ကိုပိုလိုကစားသည့်အချိန်တွင်မူလကမှူးမတ်များဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကြောင့်၎င်းသည်ဗီရိုအတော်များများအမြဲတမ်းရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် collarless တီရှပ်ကဲ့သို့ကျဉ်းမြောင်းလွန်းခြင်းမရှိသကဲ့သို့တင်းကျပ်။ ရှုပ်ထွေးသောရှပ်အင်္ကျီနှင့်လည်းအလေးအနက်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့်စီးပွားဖြစ်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်။ ပိုလိုတီရှပ်၏စတိုင်သည်၎င်း၏မွေးဖွားချိန် မှစ၍ များစွာမပြောင်းလဲသော်လည်းတောက်ပသောအရောင်များနှင့်အလွန်သေးငယ်သောအစင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကော်လာကော်လာများသည်ဖက်ရှင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ဒီပုံစံကငါတို့ကို ...
Style No .: SH-1058 အရောင်: ရေတပ်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၆၆% ရိုင်ယွန် ၂၉% နိုင်လွန် ၅% spandex ponte-de-roma, 315gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: elastic, plastic, zipper အသွင်အပြင်: အက္ခရာအံသွားမှတ်စုများ: အဖြူနှင့်အနီ အောက်ပိုင်းဖြတ် & ချုပ် panel ကိုအပေါ်ပိုက်
Style No .: SH-1057 အရောင်: အနက်ရောင် / အနီရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၇၀% ဝါဂွမ်း ၂၅% polyester 5% spandex သိုးမွေး၊
Style No .: SH-1056 အရောင်: အနက် / အဖြူ / အနီရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၇၀% ဝါဂွမ်း ၂၅% polyester 5% spandex သိုး၊ 260gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: Drawcord, ရေစိုခံနိုင်သောဇစ်
Style No .: SH-1055 အရောင်: အနက်ရောင် / တော်ဝင်အပြာအရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၇၀% ဝါဂွမ်း ၂၅% polyester 5% spandex သိုး၊ 260gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: Drawcord, ပလတ်စတစ်ဇစ်
Style No .: SH-960 အရောင်: အနက်ရောင် / အဖြူရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: 66% rayon 29% နိုင်လွန် 5% spandex ponte-de-roma, 380gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: elastic, ပလပ်စတစ်ဇစ်မှတ်ချက်များ။ ဘေးထွက်ဖြတ် & panel ကိုချုပ်
စတိုင်နံပါတ် .: SH-955 အရောင်: ရေတပ်၊ အနီရောင် / အဖြူရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: 66% rayon 29% နိုင်လွန် 5% spandex ponte-roma, 380gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: elastic မှတ်ချက်။